Ngaphambi okwandile computer ekhaya aduduze ayefana indlela kuphela ukuzwa ubuhle isiqophi imidlalo. Isizukulwane zabantu, ogama ebuntwaneni kuhlangene ngokungenakuhlukaniswa amadivayisi okudlala odumile ezifana Nes, Sega nabanye namanje sicabangele umdlalo ngaleso sikhathi omunye the best. Kuyini Emulator? Lolu hlelo esikhethekile ikuvumela ukudlala ubudala console imidlalo kumakhompyutha yesimanje.
Uma nawe ngokwengxenye amaphethini ezimnandi zakudala e 2D-ubukhulu, ke lesi sihloko ukuphi. Ikakhulukazi uma kungukuthi kubutsela uthuli elisophahleni lwendlu ambalwa amabhokisi set-top abakhiqizi ehlukahlukene. It uhlala kuze thola cishile lowo emulators enjalo, futhi ufunde indlela yokusebenzisa kubo.
isofthiwe ukulingisa ebhaliwe kakhulu, umsebenzi wakho ukuthola omunye ofanele. Ukucinga for the best, esekelwe ukubuyekezwa nezilinganiso zabantu onolwazi, ngoba ikhwalithi emulators kungaba azimisele kuphela ngemuva kokusebenzisa isengezo umkhuba. Kungcono ungathathi Abavuni "1 100", kanye nezinhlelo ezikhethekile umsebenzi ozinikele nomkhaya ezithile aduduze.
Yini emulators ezinhle amageyimu, ngakho yokuthi ungenawo ngisho kufanele uvuke kusuka kukhompyutha. Ukufaka kubo, ungakwazi ukuvula umdlalo zakho ozithandayo, futhi ukukhumbula esengumntwana ezimbalwa ukuchofoza. imishini yesimanje inemandla sokulingisa inqubo akuphazamisi Dynamics.
Ngaphezu uhlelo, kuyinto efiselekayo abe induku yokudlala, gamepad ofanele ngisho by amageyimu lanamuhla aduduze. Isimo akuyona impoqo kodwa kholwa yimi: kukhibhodi ukudlala la imidlalo kuzokuhlupha kakhulu. Sega emulators ngokuvamile ephelezelwa ifayela umbhalo, lapho omnyama nomhlophe (siqala ngolimi oluhlukile) isixwayiso esanele ngesidingo a induku yokudlala endaweni yokuchitha isizungu ukhululekile.
yokuhlushwa akugcini inqubo yokufaka uhlelo. Ngisho noma ukuthola inguqulo kwesokudla Emulator, udinga ke kakhudlwana futhi ngezifiso. umsindo izilungiselelo izinga nombala okudinga kufaneleka esiyisibopho imfanelo oyifunayo. Kungenjalo, ngisho umdlalo ozithandayo lapho wena wanqunywa kusukela ekuseni lize liyoshona, kungase kubonakale ezinjengendle inkohliso. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ukulungiswa ngokucophelela, ungakwazi ukujabulela inqubo.
Ngakho lokho emulators? ebuntwaneni iphupho noma isikhwama izinkinga ezingadingekile nokukhungatheka? Impendulo ixhomeke ulwazi lwakho lwamakhompyutha. Uma bayehluleka ukusebenzisa umdlalo ejwayelekile ye-PC futhi ulwazi lwakho yale njongo, kungcono ukuya bezungeza emulators party, njengoba udumazeke.
Nokho, uma ungeyena kuphela fan oshisekayo console imidlalo, kodwa futhi ayakwazi ngokuphumelelayo uhlele amafayela ukumisa, nezinhlelo asesabi nobunzima ekulweni amaphutha amabhuleki, khona-ke qhubeka Download Emulator futhi ugijime imidlalo zakho ozithandayo. Ngakolunye uhlangothi, kunzima ukuthola fan of aduduze ongawazi ukuthi emulators ezinjalo. Izinkinga zenzeka kuphela labo asitholanga isikhathi aduduze futhi ufuna ukubamba up. Enye into ukuthi yonke imidlalo ye-1990 wehlukile imidlalo yesimanje AAA grade, ukuze ihluzo abathandi ngeke uthole lutho ewusizo yena kuphela ngeze ngesikhathi esilahlekile.
Izinhlelo for ekwelapheni disk hard. Hlola hard drive
Indlela faka Windu olwalandela ukuphahlazeka noma igciwane?
Iphutha "ikhodi 31" uma ufaka umshayeli: indlela yokulungisa le nkinga?
Nvidia GT 440: incazelo kanye nokubuyekeza
Ayikho BIOS Boot kusuka idrayivu ye-USB - ukuthi ungasetha kanjani?
Indlela ukususa Webalta kukhompyutha: imfundo Wabasaqalayo
Kuyini ibhokisi lengxoxo?
Yini ukuba aphe Umqondisi lwakhe lokuzalwa: kunqunywa ukukhetha
Okuhlaba emthunzini - ukuthi kuyini nokuthi ukwakha simangaliso ka design ngezandla zabo?
Onyx: ayelapha kanye imilingo
Lokhu ebhentshini engadini ezibalulekile
Actress lonke Nina Sazonov: Biography, Filmography, ukuphila nomndeni yangasese
Motorcycle "Yamaha R1": ezibekiweko lobuchwepheshe